Mendị 2020mụ nwoke XNUMX: Izu gara aga, Celebs zụlitere Tempo na Ọhụụ
Ndepụta nke kachasị mma: N'izu gara aga, ndị na-eme ememme toro Tempo na Ọhụụ
Style anọwo mgbe nile n'etiti ntụrụndụ. Nke a bụ n'ihi na a na-adọta onye ọ bụla na ụdị ejiji dị mma, karịchaa, mgbe mmụọ nsọ sitere na ndị a ma ama kachasị ama ama. Ndị ama ama ama ama n’Afrika ghọtara nke a na-etinye ike ịke ọhụụ iji wuo ụdị nke onwe ha.
Eziokwu a pụtara ìhè ọzọ site na mbadamba uwe ndị na-ewu ewu ndị Afrịka mere n'izu gara aga.
Site n'aka onye mmebe ụlọ ọrụ South Africa Ọgaranya Mnisi nye onye ndu Tanzania Platnumz dị larịị, asọmpi n'egwuregwu egwuregwu chịrị ụdị egwuregwu ahụ n'izu gara aga na anya ndị pụtara ìhè bụ ndị ahụ nwere oke obi ike ma dị egwu ma ọ bụ ndị na-adịghị agbanwe agbanwe.
Mkpagharị nlegharị anya dị elu, onye egwu South South, Zulu Mkhathini bụ mmụọ ozi nanị n'ụdị ọcha ya niile. O yiri uwe jeans abụọ na-acha ọcha nke ọ dakọtara na ya na ndagwurugwu dị ọcha. Ọ tinyeziri jaket ọcha na akwụkwọ grafiti oji dị n’elu ya n’elu turtleneck n’elu. Iji mechaa anya ahụ adịghị mma, Zulu soro ya na ndị na-acha ọcha na ndị nwere agba ojii na-agbakwunye jaket na uwe elu kpamkpam.
N’izu gara aga, ụmụ nwoke na-eme ememme n’Africa gosipụtara anyị ihe ọ dị ka inwe anya dị mma maka ụdị, a na-ahụkwa mmụọ nke ukwuu maka ụdị Rave.
Nke a bụ izu kachasị ewu ewu maka izu gara aga n'ofe Africa…
. udiri nwoke 2020
ozi banyere ama ama african Mmụ nwoke Africa ejiji ụdị ndị isi ojii Zọ Ndị A Na-ewu ewu ndị Africa na-ewu ewu na-ewu ewu ụdị ọkaibe kacha ewu ewu nwoke okomoko ejiji nigerian ozi ọma nigerian NIGERIAN MEN FASHION
Ndepụta Miri Mma kachasị mma: Afọ Nwoke Afrịka Maka Amalitere Hipster Casual Izu Gara-aga